Gorfaynta Buugga "Axmed-Siilaanyo: Nin Tacab badan galiyay Qarannimada". W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar
Sunday May 12, 2019 - 01:01:38 in Wararka by Super Admin
Sida uu u dhan yahay buuggu waxa uu ka hadlayaa ammaan iyo wanaag badan oo Siilaanyo leeyahay, iyada oo aan meelna lagaga xusayn qaladaadkii siyaasiga ahaa – haddii ba ay jireen – ee uu galay muddadii dheerayd ee uu caynaanka u hayay hogg
Sida uu u dhan yahay buuggu waxa uu ka hadlayaa ammaan iyo wanaag badan oo Siilaanyo leeyahay, iyada oo aan meelna lagaga xusayn qaladaadkii siyaasiga ahaa – haddii ba ay jireen – ee uu galay muddadii dheerayd ee uu caynaanka u hayay hoggaaminta siyaasadda Soomaalida. Wax dhaliil ah, waxa ku qoran laba sadar oo laga soo xiganayo Maxamed Baashe Xaaji Xasan, kuwaas oo lagu sheegayo in Siilaanyo aanu go'aan lahayn oo uu mar kasta eed-kacarar yahay iyo in isaga oo aan nin musuq ahayn, haddana, aanu waxba ka qaban dadka uu dirto ee wax musuqa.
Buuggani waxa uu ka kooban yahay 387 bog, waxaanu u qaybsan yahay saddex qaybood oo waaweyn iyo 16 cutub oo ka sii dhanbalma. Waxa uu ka bilaabmayaa dhalashadii Axmed Siilaanyo ee deegaanka Dheryalay ee gobolka Togdheer, badhtamihii 1930meeyadii. Hooyadii Maryan Saleebaan Faarax-Sanweyne waxa ay ku ummushay xaalad aad u adag oo biya la’aaneed, xilli uu shalay oo kale aabbihii Maxamed Maxamuud dhaan biyadoon ah ugu baqoolay ceelka Caynaba oo aad uga fog Dheryalay. Dumarkii Maryan ka ummuliyay markii ay waayeen wax ay ku faraxashaan, waxa ay dhiiggii iyo dheecaankii isaga jejebiyeen cammuud/ciid, iyada oo wiilkii dhashayna caano geel loogu maydhay. Xaaladda sidaa u adag ayaa Axmed Maxamed kaga soo biirayaa adduunka.
Adeerkii Cabdillaahi Maxamuud oo Ingiriiska u shaqayn jiray ayaa malcaamadda kaga daraya Berbera. Marka uu Qur’aanka dhammeeyo ayuu Axmed miyigii ku laabanayaa. Sheekh Maxamed Dhawaaq oo Jabbuuti sannadkiiba hal mar ka iman jiray, dadka deegaankaasna qardhaasaha u xidhi jiray ayaa ka yaabaya sida uu Axmed Carabida iyo Qur’aanka u yaqaanno, deetana gacanyare ka dhiganaya. Sheekhu waxa uu Axmed aabbihii ka codsanayaa in uu wiilka ku daro, maadaama uu mustaqbal sheekhnimo leeyahay. Wuu ka aqbalayaaa, waxaana Axmed la raacinayaa Sheekhii. Marka ay Kastamka Saylac marayaan ayaa Adeerkii Cabdillaahi Maxamuud oo halkaas ka shaqeeyaa Axmed arkayaa, deetana inta uu sheekha ka reebo ayuu soo raacinaya Maxamuud Axmed Cali oo waqtigaas arday Saylac ka qorayay. Sidaas ayuu ku soo raacayaa oo uu Axmed dugsiga Sheekh ku galayaa xilli ku siman 1946/47. Deetana waxa uu dugsiga sare ka galayaa Cammuud. Ingiriiska ayuu deeq-waxbarasho u tagayaa, waxaanu muddo laba sanno ah (1958 – 1960) baranayaa ‘A level-ka’ dugsiga sare. Deetana waxa uu galayaa jaamacadda Maanjistar oo uu 1960kii ilaa 1963kii shahaadada kowaad kaga qaadanayo aqoonta dhaqaalaha, isaga oo 1963kii ilaa 1965kiina aqoonta Bangiyada ku diyaarinaya shahaadada labaad (M A).
Buugga waxa loo daabacay si tayo leh, waxaanu leeyahay jeldi adag iyo warqad cusuus ah oo akhriska ku cuddoon. Haseyeeshee, waxa guudkiisa ka muuqda dhaliil aan yarayn. Ugu horrayn, buuggani ma laha magac baadisooc sugan u noqon kara, waxaanad mooddaa in magacbixintiisa loo xushay si la mid ah sida cinwaannada maqaallada/faallooyinka: "Axmed-Siilaanyo: Nin Tacab badan galiyay Qarannimada”. Xataa haddii uu magacani cinwaan maqaal noqdo waa cinwaan aad u liita, marka aan la isla garanayn qarannimada tacabka la galiyay iyo kaalinta ninkaasi ka qaatay. Halkudhegyada Siilaanyo ee jeldiga buugga lagu xardhay looma xulan si fiiro leh, iyada oo aad gudaha buugga ugu tagayso in hadalladaasi yihiin kuwo aan xigashadoodu sugnayn oo haddii la doono la dhalanrogay, maadaama aan meelna lagu haynnin iyaga oo cod ama muuqaal ah ee qof xigtay laga sii xigtay. Xataa haddii ay xigashadoodu sugan tahay waa halkudhegyo jaban.
Waxa marar badan la is dul taagayaa nololwadaagga kalgacalka ku dhisan ee u dhexeeya Axmed iyo Aamina. Nololwadaaggaas oo soo bilawday 1968kii, waxa ka dhex beermay shan carruur ah: Luul, Hodan, Kulmiye, Cali-Salaan iyo Rashiid. Aamina-Weris waxa ay sheegaysaa in ay aad uga naxday markii ay maqashay in Axmed-Siilaanyo loo doortay guddoominta SNM oo aanay hore isugu ogayn, maadaama ay ku keliyaysanayso korinta carruurta iyo nolosha adag ee qurbaha. Muddadii uu Axmed ku foognaa hoggaaminta jabhadda, waxa ay Aamina u xidhiidhayeen hannaan ku dhisan wadahadal teleefanka ah iyo waraaqo isdhaafsi. Waa halkaa halka uu uga soo qorayo farriimaha badan ee ay ka midka tahay "waalan maayo, waan diiday in aan waasho!”
2010kii waxa uu xisbiga Kulmiye doorashada ku guulaystay iyada oo uu Maxamuud Xaashi Cabdi yahay kaaliyaha shakhsiga ah ee Siilaanyo. Maxamuud waxa uu madaxweynaha ka codsaday in uu Wasiir ka dhigo. Xirsi halkii uu Maxamuud banneeyay ayuu fursad ka arkayaa, waxaanu Maxamuud ka codsanayaa in uu kala hawlgalo booskaas. Deetana Maxamuud Xaashi waxa uu Siilaanyo u keenayaa Xirsi oo sidaas ku noqonaya gacanyaraha madaxweynaha ‘Chief of Cabinet’. Ummadda oo dhammi aad bay uga qaylisay xilka loo dhiibay Xirsi. Tusaale ahaan, salaaddiinta beesha Habar-Toljeclo marar kala duwan ayay madaxweynaha kala hadleen in uu Xirsi beddalo, maadaama dadka oo dhammi ka soo taagan yihiin, laakiin Siilaanyo taas cid walba wuu ka diiday, si la mid ah sidii uu cid walba uga diiday in uu Cascasey Kismaayo ku soo celiyo. Aamina-Weris oo qaybtan ka warramaysaa waxa ay sheegaysaa in iminka mar kasta oo Xirsi lala soo hadalqaado Siilaanyo yidhaahdo: "iska daaya, Xirsi noloshuba wax way bari doontaaye – he will learn the hard way.”